एन्ड्रोइड १२ को डिटेल लीक, के के हुनेछन् विशेषता? - Technology Khabar
» एन्ड्रोइड १२ को डिटेल लीक, के के हुनेछन् विशेषता?
एन्ड्रोइड १२ को डिटेल लीक, के के हुनेछन् विशेषता?
गुगलले केही समयअघि एन्ड्रोइड १२ को डेभलपर प्रिभ्यू परीक्षणका लागि उपलब्ध गराइसकेको छ। कम्पनीले आगामी मे १८ मा हुने वार्षिक इनपुट/आउटपुट इभेन्टमा आफ्नो आउँदै गरेको अपरेटिङ सिस्टम प्रस्तुत गर्नेछ।
गुगल इनपुट आउटपुटमा एन्ड्रोइड १२ बाहेक पिक्सेल ५ए फाइभजी पनि सार्वजनिक गरिनेछ। केही दिन यता आइरहेका चरिपोर्टहरुका अनुसार पिक्सेल ५ए फाइभजी तत्कालका लागि अमेरिका र जापानमा मात्र उपलब्ध गराइनेछ।
एक्सडीए डेभलपरहरुले एन्ड्रोइड १२ का केही फिचरहरु पत्ता लगाएका छन्। तर यी सबै फिचरहरु तत्कालका लागि परीक्षकका क्रममै रहेका छन्।
यस्तो छ फिचर
स्क्रोलिङ स्क्रीनशट: रिपोर्ट अनुसार नयाँ अपरेटिङ सिस्टममा स्क्रोलिङ स्क्रीनशट फिचर रहनेछ जुन हालको एन्ड्रोइड ११ मा रहेको स्क्रीनशट फिचरको अपडेटेड भर्जन हुनेछ। यसमा यूजरले स्क्रीनशट गरेको भागलाई क्रप गरेर कुनै पनि भाग सेभ गर्नसक्ने अप्शन हुनेछ।
एप पेयर: यसमा दुई ओटा एपलाई आपसमा जोड्ने एप पेयर फिचर रहनेछ। यो फिचरमार्फत् यूजरले एक पटकमा दुई ओटा एप खोल्न सक्नेछन्। बबल ट्याप गरेर आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ।
वेक अप गुगल असिस्टेन्ट पावर बटन: गुगलले नयाँ अपरेटिङ सिस्टमका लागि वेक अप असिस्टेन्स बटन नाम गरेको फिचरमा काम गरिरहेको बुझिएको छ। यो फिचर मार्फत् पावर बटन होल्ड गरेपछि गुगल असिस्टेन्ट इनेबल हुनेछ।
नयाँ भोल्युम कन्ट्रोल: भोल्यूम कन्ट्रोलका लागि नयाँ इन्टरफेस आउन सक्ने सम्भावना प्रबल छ। यसमार्फत् भोल्यूम कन्ट्रोल बटन पहिलेको भन्दन अझ ब्राइट देखिनेछ।
नयाँ वाइफाइ र इन्टरनेट सेटिङ: एन्ड्रोइड १२ मा नयाँ वाइफाइ तथा इन्टरनेट सेटिङ अप्शन देख्न सकिनेछ। लीक भएको डेभलपर्स प्रिभ्यूमा नयाँ कनेक्टिभिटी फिचर्स अप्शन पाइएको छ। गुगलले यसलाई इन्टरनेट क्विक सेटिङ्सको नाम पनि दिन सक्ने बुझिएको छ।
डिभाइसका लागि क्विक कन्ट्रोल सेटिङ: एन्ड्रोइड ११ मा गुगलले डिभाइस कन्ट्रोल फिचर दिएको थियो। एन्ड्रोइड १२ मा भने यो फिचरलाई क्विक कन्ट्रोल टाइलसँग मिसाएर आउनेछ। यसमा कार्ड्स र पासेज मेन्यु पनि राखिनेछन्।
स्प्ल्याश स्क्रीन: एन्ड्रोइड १२ को लीक भएको विवरण अनुसार यसमा एप आइकनको ब्याकग्राउन्डमा स्प्ल्याश स्क्रीन फिचर पनि आउनेछ।
एप ड्रअर ओपनिङ एनिमेशन: अब आउने अपरेटिङ सिस्टममा एन्ड्रोइड १२ लञ्चरका साथमा नयाँ एप ड्रअर ओपनिङ एनिमेशन पनि दिइनेछ।
नयाँ चार्जिङ एनिमेशन: एन्ड्रोइड १२ मा फोन चार्जिङका लागि नयाँ एनिमेशन फिचर पनि आउनेछ।
ब्राइटनेस स्लाइडर: अब आउने अपरेटिङ सिस्टममा ब्राइटनेस स्लाइडरमा केही परिवर्तन देख्न सकिनेछ। यो पहिलेभन्दा अझ चहकिलो रुपमा आउनेछ।
रियलमीले भारतमा नयाँ स्मार्टफोन सीरीज ‘नार्जो’ ल्याउँदै, रेडमी र पोकोलाई टक्कर दिने
एप्पलको आगामी आइफोनहरुमा चिनियाँ कम्पनी बिओईका ओएलईडी स्क्रीन प्रयोग हुने
अब डस्टबिनबाटै मोबाइल चार्ज गर्न सकिने, काठमाडौँ उपत्यकामा फोहर सङ्कलन गर्न स्मार्ट डस्टबिन
साना किराहरुले समेत बोकेर हिँड्न सक्ने वायरलेस क्यामराको विकास